Castillo de Colomares, tranobe maoderina | Vaovao momba ny dia
Castillo de Colomares, tranobe maoderina iray
Mariela Carril | | Malaga, Inona no ho hita
Eoropa dia feno trano fiarovana amin'ny karazany sy sokajin-taona rehetra, ary any Espana dia misy zavatra maro azo isafidianana. Saingy androany tsy manana fananganana antonony na rava na trano fonenan'ireo mpanjaka isika, fa trano maoderina vaovao sy vaovao kosa, avy amin'ny lafaoro, azontsika lazaina.
Momba izany Lapan'i Colomares, Ilay hitanao amin'ny sary. Any Malaga izy io ary sarotra raha telopolo taona izy. Te hahafantatra ny tantarany ve ianao? Dia andao hanomboka…
Ity fananganana kanto ity dia ao Benalmádena, faritanin'i Malaga, Espana, ary rehefa nilaza aho fa zara raha tamin'ny faha-telopolo taonany dia marina izany: naorina tamin'ny faramparan'ny taona 80 izy io miaraka amin'ny biriky, simenitra ary vato.
Andao atomboka amin'ny tantarany satria mety manontany tena ianao hoe iza no nieritreritra ny hamolavola ity lapa kely ity. Tsangambato tokoa izy io, a lapa-tsangambato manome voninahitra ny asan'i Christopher Columbus sy ny vondron'ireo mpitsangatsangana mahery fo izay nidina an-dranomasina tamin'ny 1492.
Ny mpamorona azy, mpamorona, ny rain'ny zavaboary dia ny Dr. esteban Martín Martín, maty tamin'ny taona 2001. Voalaza fa fony izy niasa tamin'ny dokotera tany Etazonia dia gaga izy fa kely ny fahalalana nananan'ny Amerikanina momba ny tena toe-piainan'ny fahitana an'i Amerika, ka niverina niasa izy.
Tamin'ny 1987 ary efa tao an-tsain'i Dr. Martín ny endrik'ilay asany. Nanomboka tamin'io taona io ary nifarana tamin'ny 1994 ny asa. Mpiasa roa ihany no niarahany niasa satria izy nahay tsara tamin'ny maritrano, ny famolavolana, ny zavakanto ary ny kely teo amin'ny fanaovana vato. Miaraka amin'ny hevitra raikitra mitantara ny fahitana an'i Amerika dia niasa sy niasa izy nandritra izay taona maro izay. Rehefa nisy ny vola dia vita ny asa, raha tsy izany dia nijanona ny asa. Tsy nisy ora niasana ary izy ireo ihany no nanangana ny trano manontolo satria indrisy fa tsy dia nahazo fanampiana firy avy amin'ireo sehatra ofisialy sy mpandala ny nentin-drazana.
Ny firafitra iray manontolo dia milaza ny fomba nahazoan'i Columbus fanampiana ara-toekarena an'ny Monarchs katolika, ny fomba nanampiany an'i Pinzón hahazoana tantsambo ary ny fomba nialan'ny sambo ny seranan'i Palos tamin'ny 3 aogositra 1492 Vao 33 andro taty aoriana dia tany Amerika izy ireo, tao amin'ny nosy iray izay nantsoin'ny tompon-tany ny iguanas ary ny Espaniola antsoina hoe San Salvador. Izany rehetra izany sy ny maro hafa dia notantaraina tamin'ny vato nanerana ny trano mimanda.
Raha mahatadidy an'i Martín Alonso Pinzón dia misy a lohan'ny soavaly varahina, zavatra toa ny Pegasus an-dranomasina. Misy koa ny ampingan'ny Castile, amin'ny varahina, ary ao anatiny dia misy efitrano kely izay manao kabary kabary ary manana ny sarin'i Kristy sy lakolosy tantsambo izay mahatadidy ny nosy voalohany nandehanan'ilay dia.
Voalaza momba an'io kabary io fa fiangonana kely indrindra eto an-tany satria 1 metatra toradroa fotsiny io. Eny, ao amin'ny Guinness Book of Records ka tsy maintsy ho marina ...
ihany koa Misolo tena ny Pinta, ny Niña ary ny Santa María. Ny Pinta no eo amin'ny façade lehibe ary notazomin'i Pegasus, ilay soavaly angano, ny zazavavy dia eo an-tampon'ny tranobe, eo ambanin'ny andohalambon'ny Rabida, monasitera fanta-daza nialokaloka an'i Columbus tamin'ny nahatongavany avy tany Portugal; ary farany ny Santa María, tafasaraka tamin'ireo roa hafa, nahatadidy ny zava-nitranga mampalahelo fa ilay sambo very tamin'ny Krismasy tao Santo Domingo ankehitriny. Novonoin'ireo karana ny ekipa mpiadiny 39.
Christopher Columbus dia nanao dia efatra tany Amerika ary ireo dia niainany dia ao anaty varavarankely raozy goavambe goavambe goavambe. Amin'ity fomba tany am-boalohany ity, ny dokotera Martín Martín dia maniry ity faritr'i Espana ity, tany iray izay tena mpiaro ny fahitana ny Tontolo Vaovao, hanome voninahitra an'io traikefa nahafinaritra io tamin'ny fomba iray. Ny vokany? eny somary kitsch ary betsaka ny olona tsy tia an'io. Nisy zavatra hafahafa tavela, na tsangambato na trano mimanda ... fa noho io antony io ihany, dia mendrika ny fitsidihana izy io.
Ary ity lapa ity no vokany, fananganana manaitra izay Mudejar, Gothic, Byzantine ary Romanesque dia mifangaro. Misy fitsangatsanganana misy torolàlana ary mety tsara ny mandray azy ireo satria amin'izay dia azonao atao tsara ny mankasitraka ny toerana misy sy ny fikasany.
Fampahalalana azo antoka momba ny trano mimanda Colomares
Adiresy: Finca la Carraca s / n. Benalmádena.
Ora: amin'ny tranokalany dia manambara izy fa mihidy amin'ny Alatsinainy sy Talata. Ho an'ireo daty ireo dia misokatra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 1:30 hariva ary hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 6 hariva. Amin'ny lohataona sy fararano dia mikatona adiny iray taty aoriana ary amin'ny fahavaratra dia manokatra amin'ny tolakandro eo anelanelan'ny 5 sy 9 hariva.
Vidiny: vidin'ny fidirana ankapobeny 2 euro. Ny zaza sy ny mpisotro ronono dia mandoa 1 euro. Ho an'ny vondrona misy olona mihoatra ny 30 dia mila mitahiry.
Ankoatry ny fandehanana mamaky ny atiny sy mankafy ny fomba fijery mahafinaritra an-dranomasina atolony, ity toerana ity dia mitazona fampisehoana boky, fihaonambe, tsena antenantenany, tantara an-tsehatra, fampisehoana dihy, kaonseritra ary fihaonana ara-kolontsaina isan-karazany. Ho fanampin'izay, manambara izy fa hisokatra tsy ho ela ny tranombakoka Columbian.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Malaga » Castillo de Colomares, tranobe maoderina iray
Ny spa tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra
Inona no jerena ao Andorra